प्रेस काउन्सिल अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्,‘अपमानित हुनलाई हामीले भारतीय च्यानललाई पैसा तिर्नु पर्ने हो ?’ « Etajakhabar
रुपनि जि.एम – पछिल्लो समयमा भारतीय मिडियाले जसरी दुई छिमेकी देशका सम्मानित व्यक्तित्वहरुलाई जोडेर प्रसारण गएिको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुको यतिबेला सर्वोत्र चर्को आलोचना भईरहेको छ । विशेषगरी नेपाल विरोधि गतिविधि गर्ने सबै भारतीय च्यानहरुलाई नै अहिले नेपालमा बन्द गरिएको पनि छ । नेपालको हरेक कुरामा हस्तक्षेप गर्ने भारतको प्रवृति आजको भने हुँदै होईन । परापुर्व कालदेखि नै भारतले नेपालको हरेक क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व जमाउँदै आईरहेको हुनाले पछिल्लो समयमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र चिनीयाँ राजदुत यान्कीको सम्बन्धलाई लिएर बनाएको मिडिया रिर्पोट पनि त्यसैको एउट अशं मानिन्छ ।
आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा उनको चरित्र नै ह’त्या गर्ने गरेर गलत प्रचार गरेको भन्दै नीजि क्षेत्रका केवल सञ्चालकहरुले बिहीबारदेखी झण्डै २ दर्जन भन्दा बढी भारतीय मिडियालाई नेपालमा प्रसारण हुनबाट रोक लगाएको छन् । जसको अहिले नेपालमा समर्थन र विरोध दुबै भईरहेको छ । यस प्रकारको निर्णयप्रति सहमति र असहमति जनाउने जमातले आ–आफ्नै तरिकाले विचारहरु पस्की रहेकै बेला प्रेस कासउन्सिलमा कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ के भन्छन् त ? उनको विचार जान्नकालागी ताजाखबरले उनीसंग कुराकानी गरेको छ । सोही कुराकानीको केही अंश ।
भारतीय मिडियाले प्रधानमन्त्रीको चरित्रह’त्या गर्ने कोसिस गरेपछि एक कदम अगाडी बढ्दै सरकार भन्दा पहिले नै नीजि क्षेत्रका केवल सञ्चालकहरुले भारतीय च्यानको प्रसारण बन्द गरे यस्लाई तपाँईले कसरी लिनु भएको छ ?
यस्लाई मैले सरकार पछिपछि र जनता अघिअघि भएको ठानेको छु । मल्टि सर्भिस अप्रेटर जस्ले शुल्क लिएर जनतामा सर्भिस प्रोभाईड गर्छन् उनीहरुलाई एक प्रकारको थ्रे हुने हुनाले उनीहरुले बन्द गरेको हुनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने नेपाल यो पहिला पनि धेरै काण्डहरु भएका छन् । ती सबै काण्डहरुमा जनताहरु आक्रोशित भएर प्रतिक्रिया जनाएको पनि हामीले देखेकै छौं । त्यसको निशाना नेपालका डिस होमहरुलाई लगाईयो भने के हुन्छ ? किनभने विभिन्न च्यानलहरु त त्यहीबाट नै प्रसारण हुन्छन् ।
सुबिसु, प्रभु लगाएत केवल अप्रेटहरुले जुन प्रकारको सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । उनीहरु माथि पनि आक्रोश पोखे भने त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिन्छ ? त्यसमाथि विप्लव समूहको ब’म काण्डको व्यवहारबाट त सबै नेपाली जनता ज्ञात नै छन् । यति मात्र नभई हिजो आज त सामाजिक सञ्जालबाट नै जनताहरुले प्रतिकृयाहरु जनाउँछन् उनीहरु नै सक्रिय नहोलान् भन्ने स्थिति रहंदैन नी । यस्तो अस्थामा नीजि क्षेत्रका केवल सञ्चालकहरुले भारतीय च्यानलहरुलाई बन्द गर्नु भनेको उनीहरुले पनि आफ्नो व्यावसायिक धर्म निभएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ ।
सरकार पछिपछि र जनता अघिअघि भएको भन्ने तपाँईको भनाईमा उसो भए नीजि क्षेत्रका केवल सञ्चालकहरुलाई सरकारको समर्थन भएको हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ?
यस्लाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने यही विषयमा सरकारका प्रवक्ताको पनि त हामी कानून सम्वत केही उपचारमा जान्छौं भन्ने बिहीबार भनाई सर्वजनिक भयो नि । त्यही बेलुकादेखि सरकारले पनि समन्वय ग¥यो र हिजो शुक्रबार त सारा सर्भिस प्रोभाईडरहरुसंग सरकारले औपचारिक छलफल नै ग¥यो नि । यति भएपछि सरकारको समर्थन रह्यो या रहेन भन्ने प्रश्न गरिरहन या यो विषयमा बढी घोतलि रहन आवश्यक नै भएन नि ।
यसै विषयमा भारतका वरिष्ठ पत्रकारहरुले पनि आफ्नै मिडियाहरुलाई गोजी मिडियाको संज्ञा दिएका छन् । यो अवस्थामा उनीहरुलाई रोक लगाई रहन आवश्यकता थिएन भन्ने पनि एक पक्षको धारण छ । यस्मा तपाँई के भन्नु हुन्छ ?
यसमा म के भन्न चाहान्छु भने । नेपाल होस् या संसारको जुनसुकै मुलुक नै किन नहोस् उसको आफ्नो भूगोल हुन्छ । आफ्नै नीति नियमहरु हुन्छन् । त्यो देशमा विदेशी सेना बर्दि सहित पस्न पाउँछ ? वा विदेशी जाहजहरु अनुमति बिना नै छिर्न पाउँछन् ? पक्कै पनि पाउँदैनन् । हरेक देश आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ । चीनमा भारतीय च्यानलहरु प्रसारण हुन पाउँछ ? सिएनएन, बिबिसी, फेसबुक, ट्वीटरहरुको प्रसारण हुन्छ ? त्यसैगरी भारतमा चीनियाँ च्यानलहरुको प्रसारण हुन्छ ? भारतले चीनका ८९ वटा एप्सहरु बन्द गरिदियो त ? त्यसमा कसैले केही भनेका छैनन् । यो भनेको आफ्नो आफ्नो सरकारले आफ्नो आफ्नो जनताका हीतमा के गर्ने भन्ने कुराको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने कुरा हो ।
उनीहरुले आफ्नो देशमा के गर्ने भन्ने विषयमा स्वतन्त्र छन् हुनु पर्छ । अन्यथा नेपाल जस्तो देशमा जथाभावि प्रसारण हुने सामाग्री आए भने त्यसले बितण्डना नै मच्चाउँछ । जस्तै उदाहरणकालागी म तपाँईलाई भनिदिउँ, हाम्रो संस्कार र संस्कृति भारतसंग केही हदसम्म मिल्ने भएको हुनाले पहिला भारतीय मिडियाबाटै रामायण र महाभारत टेली श्रृंखला आउँदा धरानमा केटाकेटीले धनुकाँध बनाएर चलाएर आखाँ फु’टाई दिएका थिए आफ्नै साथीहरुको । यस्तो प्रभाव पनि हामीमा परिरहेको थियो । अबको समय भनेको अरु देशका च्यानल होईन कि आफ्नै देशमा स्वदेशी च्यानलहरु उत्पादन गर्ने यो एउटा अवसर र चुनौति पनि आईलागेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
तपाँईले यस्तो अभिव्यक्ति दिईरहंदा धेरैले भारतीय च्यानल बन्द गरिनु हुँदैनथ्यो भनेर अभिव्यक्तिहरु पनि दिई रहेका छन् नि । यो विषयमा तपाँई के भन्नु हुन्छ ?
म सबैको विषयमा केही भन्न चाहाँदिन । र सक्दिन पनि । किनभने सबैको आ–आफ्नै विचार व्यक्त गर्ने क्षमता हुन्छ । त्यही अनुरुपको ज्ञान हुन्छ । उहाँहरुको विचारमा मैले खण्डन गरिरहन जरुरी पनि देख्दिन । तर म यति मात्रै भन्न चाहान्छु कि यो देशको नियम र कानून मान्नु पर्छ कि पर्दैन ? चाहे त्यो आम नेपाली नागरिक होस् या पत्रकार या बुद्धिजीविहरु नै किनहोस् । कानून त सबैकालागी बराबरी नै हो नि ? त्यही बराबरी कानूनलाई सबैले बराबरी रुपमा नै मान्नु पर्छ होला नि ? त्यसैगरी प्रधानमन्त्री त मेरो नीजी वा तपाँईको भन्ने त होईन होला नि ?
आफ्नै श्रीमतिले त मेरो श्रीमान प्रधानमन्त्री भनेर अधिकार जताउन पाउँदिनन् भने प्रधानमन्त्री त सबै नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति हुन् । सम्पुर्ण देशकै इज्जत प्रधानमन्त्रीसंग जोडिएको हुन्छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्रीको चरित्र नै ह’त्या गर्ने प्रयास भारतीय मिडियाबाट हुन्छ र त्यस्ता मिडियालाई नेपालमा प्रसारण हुनबाट प्रतिबन्द लगाईदा यहाँका बुद्धिजीवि, पत्रकार, विश्लेषकहरुको टाउको दुखाई हुन्छ भने यो विषयमा मेरो भन्नु केही छैन ।
यसरी बन्द गरिदिंदा नेपालप्रतिको धारणा विश्व मानचित्रमा कस्तो रहन जान्छ ? यस्लाई तपाँईले कसरी विश्लेषण गर्नु हुन्छ ?
लोकतन्त्र भनेको मनपरी गर्ने, मनपरी लेख्ने, मनपरी बोल्ने छुट हो भने हामीलाई भन्नु केही छैन । अमेरिका जस्तो देशमा पनि राष्ट्रपति र मिडियाकर्मीका बीचमा भिडन्त हुने नै गरेको छ । भारतमै पनि गोजी मिडिया भनेर त्यहींकै पत्रकार र बुद्धिजीविहरुले भनेकै छन् । भारतीयहरु नै भारतीय मिडियाबाट आजित छन्, पिडित छन् । त्याहाँका प्रबुद्ध पत्रकारहरुको टिभी सोहरु हेरेरै थाहा पाउन सकिन्छ । सिंगो भारत होईन के । फन्डामा गयो भारतीय मिडिया । भारतीय मिडियाले जनताको भावना भन्दा पनि टिआरपीकोलागी मनपरी ठोक्न थाल्यो । तथ्यहीन र आधारहीन कुराहरु बोल्न थाल्यो । त्यसमा हाम्रो आपत्ति हो । त्यही आपत्तिकै आधारमा भारतीय च्यानलहरु जुन प्रकारले बन्द भएका छन् यो नेपालकै हीतमा छ । त्यसो भएको हुनाले विश्व मानचित्रमा नेपालको कुनै पनि बदनामी भएको छैन र हुँदैन पनि ।
भारतीय च्यानलहरु बन्द गरीदिंदा नेपालको विरुद्धमा भारतले कस्तो प्रोगण्डा आफ्ना जनतामाझ पस्कि रहेको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनबाट नेपाल चुकेको र जस्ले गर्दा नेपाललाई नै घाटा हुने देखिन्छ भन्ने पनि एक प्रकारको बहस भईरहेको छ । यस्मा तपाँईको भनाई के छ ?
नेपाललाई कत्ति पनि घाटा छैन । घाटा उनीहरुलाई नै छ । किनभने उनीहरुलाई घाटा हुँदैनथ्यो भने उनीहरुले लम्पसार परेर गल्ति भयो प्रभु माफि पाउँ भनेर क्षमा याचना गर्नु पर्दैनथ्यो । किन माफि मागे त ? माफि माग्नु पर्नेगरी त्यस्तो झुटो सामाग्री किन प्रसारण गर्ने त ? नेपालमा भारतीय च्यानलहरु बन्द गरिंदा नेपालले नै घाटा बेर्होनु पर्नेछ भन्नेहरुलाई मेरो प्रश्न । भारतका २÷४ वटा च्यानल नेपालमा नहेरिंदा नेपाललाई कसरी घाटा ? तिनै भारतीय च्यानल हेर्नकोलागी हामीले आफ्नो पैसा तिरेका छौं । पैसा तिरको मतलब हामीले गा’ली खाने हो र ?
आफैले पैसा तिरेर हामीले नै गा’ली सुन्नलाई किन अभिषप्त छौं र हामी ? हामीलाई केको बाध्यता ? हामीले त उनीहरुको च्यानल हेरे बापत टयाक्स तिरेका छौं । शुल्क तिरेका छौं । गा’ली खानु नै थियो भने किन पैसा तिर्ने त ? पैसा तिरीतिरी पनि कसैले गा’ली खान्छ र ? खाँदैन नि । भारतीय च्यानलहरुकोलागी पनि नेपालले बकाईदा पैसा तिरेको छ । र पैसा तिरेर हेरिदिंदा पनि बिना अर्थको गा’ली खानु पर्छ भने त्यसलाई बन्द गरेकै बेस हुन्छ । यसो गर्दा नेपाललाई घाटा हुन्छ भन्नेहरुले चुरो कुरा नबुझेका मात्र हुन् ।
यस विषयमा तपाँईले भारतीय प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार पनि गर्नु भयो । उनीहरुको प्रतिकृया कस्तो रह्यो ?
तपाँईहरुको मिडियाले हाम्रा प्रधानमन्त्रीको चरित्रह’त्या गर्ने जुन प्रकारले कोशिश ग¥यो त्यो ठीक गरेन । भनेर मैले नै भारतीय प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार गरेको थिएँ । त्यो मैले शुक्रबार गरेको हो । त्यति बेला उहाँहरुले यस विषयमा आफुहरुको ध्यान केन्द्रित भएको छ भनेर सकारात्मक प्रतिकृया दिनु भएको थियो । औपचारिक रुपमा तपाँईसंग कुराकानी गर्दासम्म कुनै जवाफ आएको छैन । आईतबार भारतको सार्वजनिक बिदा भएको हुनाले सोमबारसम्म केही जवाफ आउँछ कि भन्ने विश्वास छ । र हामीलाई उहाँहरुको जवाफको पर्खाई पनि छ ।
तपाँईहरु आफैले पनि अनलाईनहरुलाई बन्द गराउनु भएको छ । उनीहरुलाई सोध्दै नसोधी बन्द गराउनु संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्राको हक विरुद्धको काम भएन र ?
पहिलो कुरा त प्रेस स्वतन्त्रता भनेको नियम पालना गर्नेलाई मात्र प्रेस स्वतन्त्रता भनेर मानिन्छ । जब राज्यले त्यो पत्रकार हो भनेर चिन्दै चिन्दैन । त्यो मिडिया हाउस हो भनेर चिन्दै चिन्दैन भने त्यस्ता मिडिया हाउसलाई बन्द ग¥यो भनेर केको प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघन हुन्छ मलाई बताउनुस् न त ? यदि आफुलाई पत्रकार भनेर चिनाउन चाहाने हो भने त उस्ले पनि नियमको पालना त गर्नु पर्छ होला नि ? राज्यको निकायमा दर्ता भएर म पत्रकार हुँ वा मेरो मिडिया हाउस आधिकारीक रुपमा सञ्चालन छ है भन्नकालागी दर्ता हुनु परेन ?
राज्यको निकायमा पनि आउन नमान्ने । आफैले प्रेसको ज्याकेट बनाउने, आईडि कार्डकोलागी आफैले जन्तर बनाएर ७० रुपैंयाको प्लास्टिकको कार्ड भिडेर कोही पत्रकार हुन्छ र ? हुँदैन नि । म तपाँईलाई एउटा उदाहरणबाट अझैं प्रष्ट कसरी पार्छु भने, लाईसेन्स भएको बन्दुकले मान्छे म¥यो भने पाईने सजाय र बिना लाईसेन्सको बन्दुकले मान्छे म¥यो भने पाईने सजायमा कति फरक हुन्छ ? हो त्यस्तै हो यो दर्ता गरिएका मिडिया र नगरिएका मिडियका प्रकृया पनि । यस्ता दर्ता बिनाका मिडियाहरुलाई हामीले बन्द गरेका छौं भने त्यसलाई बन्द गरियो भनेर नबुझे हुन्छ । हामीले त बरु उल्टै उस्लाई कानूनी प्रकृयामा ल्याएर जोगाउन खोजेका हौं ।
विज्ञापन बिना नै सञ्चालन भईरहेका अनलाईन सञ्चालकहरुलाई प्रेस काउन्सिलले कस्तो सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ? यो विषयमा प्रष्ट पारि दिनुस् न ।
प्रेस काउन्सिलले सेवा सुविधा नदिने होईन दिन्छ । तर त्यसकालागी अनलाईनहरुको वर्गीकरण हुन जरुरी छ । जुन अहिलेसम्म भएको छैन । र हामी यस्को तयारीमा छौं । वर्गीकरणको मापदण्ड तयार गरेर छिट्टै नै सरकारलाई बुझाउने योजनामा छौं । सरकारले बजेटबाट अनलाईनहरुलाई पनि सुविधा दिने भनेर बजेट बिनियोजन गरेको छ । तर दिनकोलागी २ हजार ६५ वटा अनलाईनहरु दर्ता भईसके । यस्कोलागी करिब ४ हजार वटा अनलाईनहरु दर्ता गर्नु पर्ने हुन्छ ।
अहिले प्रेस काउन्सिलको वर्षेनी ९ सय २२ वटा पत्रिका वर्गीकरण हुन्छ । त्यसकालागी वर्षेनी १२ करोड रुपैंया खचै हुने गरेको छ । अब ४ हजार वटा दर्ता भएपछि उस्लाई के आधारमा पैसा दिने ? विज्ञापन दिने ? कति बजेट लाग्ने त्यसको हिसाब त हुनु प¥यो । त्यसकोलागी हामीले गृहकार्य गर्दैछौं । यो गृहकार्य पुरा नहुँदासम्म यसै भन्न सकिंदैन । तर यो भनेको सुविधा दिनकैलागी हो । र सुविधा टयाक्सको दायरामा ल्याउन साथै कानूनी संरक्षण प्रदान गर्न पनि हो । नत्र त अराजक भैहाल्छ नि । जस्ले पनि झोलामा ल्यापटप बोकेर जाहाँबाट पनि जे पनि समाचार अपलोड गरिदिन्छ । भिडियो खिचेर हालि दिन्छ ।
लकडाउनकै कारण यति बेला ठुला मिडियामै आबद्ध पत्रकारहरुको रोजगार धरापमा परेको छ । जुन कुरा तपाँईलाई पनि थाहा छ । यो अवस्थामा प्रेस काउन्सिलले यी घटनाहरुलाई कसरी हेरीरहेको छ ?
विशेष त प्रेस काउन्सिलले दुई वटा काम गर्छ । एउटा अखबारहरुको वर्गीरकण र अर्को पत्रकारहरुलाई बिरामी, घाईते अवस्थामा उपचार खर्च । साथै दुर्घटनामा परेर क्यामेरा, ल्यापट लगाएतका सामाग्रीमा खर्च गर्नु परे अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँछ । आचार संहिताको उजुरीहरु सुन्छ त्यसमा गल्ती भेटाए कार्वाही गर्छ र अन्यायमा परेको थाहा पाए संरक्षण पनि दिन्छ । मुख्य कुरा यही हो । जहाँसम्म पत्रकारहरुको रोजीरोटी खोसियो । न्युनतम पारिश्रम दिएन भन्ने कुरा छ त्यसकालागी हेर्ने न्युनतम् पारिश्रमीक निर्धारण समिति छ । अनि उजुरीहरुको सुनुवाई भएन । पावरको कुरा हुन गयो भने त्यसकालागी पनि सूचना तथा प्रसारण विभाग छ । र साथै पत्रकार महासंघ भएको कुरा त सबैलाई नै थाहा छ ।
पत्रकार महासंघको अध्यक्ष प्रेस काउन्सिलको पदेन सदस्य हुने हुनाले हामीले आपसी सहकार्य र छलफलबाट गर्नु पर्ने सबै कुरा गरि नै रहेका छौं । तर पत्रकार कसैलाई पनि सुखको घडीमा ठुलो मिडिया हाउस चलाएर ५÷६ वटा मिडिया हाउस पनि चलाउनी । तिनै पत्रकारहरुको श्रमबाट लेखिएको समाचारका आधारमा बिग हाउसको मिडिया र मालिक भनेर समाजमा प्रतिष्ठा बनाउनी । तर अहिले ३÷४ महिना लस भयो भन्दैमा तलब काटिदिने, खान दिने, रोजीरोटी खोसिदिने, जागिरबाट निकाली दिने । यो भनको बैगुन पारा हो । गद्दारी पन हो । जस्को प्रेस काउन्सिल घोर भत्र्सना गर्दछ ।
काठमाडौ । नेपाल र भारतका परराष्ट्रसचिवहरूको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले द्विपक्षीय सहयोगका
काठमाडौ । करीब एक वर्षको अन्तरालपछि राजधानीमा नेपाल र भारतका परराष्ट्रसचिवहरूको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठक शुरु भएको
निधन अघि म्याराडोनाले भनेको यस्तो कुराले मेस्सी र रोनाल्डोलाई रुवायो, जिवनभरका लागि छोडेर गए यस्तो सम्झना
एजेन्सी । फुटबल जगतका एक महान खेलाडी अर्जेन्टिनी स्टार डिएगो म्याराडोनाको निधनले सारा फुटवल प्रेमीलाई
महिनाभरीलाई पुग्ने खर्च बोकेर सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा किसान, गर्दैछन् लामो लडाईको तयारीमा
एजेन्सी । केन्द्रसरकारद्धारा भर्खरै पास गरिएको तीनवटा कृषि कानूनको विरुद्धमा भारतका किसानहरुले आन्दोलन शुरु गरिसकेका
ड्युटिवाटै हराएर युवतीसंग होटलको कोठामा फेला परेको भनिएका डिएसपीले दिए यस्तो अचम्मको बयान
११ मंसिर २०७७, बिहीबार ११:५१
म्याराडोनाको निधन भएपछि अर्जेन्टिनामा ३ दिन राष्ट्रिय शो’कको घोषणा, रोनाल्डो र मेस्सीले बिगत सम्झंदै यसो भने
११ मंसिर २०७७, बिहीबार ११:४९